‘हस्तमैथुन’ सिनले गर्दा स्वरा भास्कर ट्रोलको शिकार भईन् ! « Online Tv Nepal
‘हस्तमैथुन’ सिनले गर्दा स्वरा भास्कर ट्रोलको शिकार भईन् !
Published : 8 June, 2018 7:57 pm
बलिउड अभिनेत्री स्वरा भास्कर फेरी एकपटक सोशल मिडियामा ट्रोलको शिकार भएकी छिन् । हालै सार्वजनिक भएको फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’को एक दृश्यको कारण उनलाई उडाइएको हो ।
खासमा फिल्ममा स्वरा भास्करले एक सिनमा हस्तमैथुन गरिरहेको देखाइएको छ । यही दृश्यलाई लिएर दर्शकले ठट्टा गरेका छन् । उनीहरुले यो दृश्य ‘आपत्तिजनक’ समेत भन्दै ट्वीट गरेका छन् । स्वरालाई भद्दा गाली पनि गरिएको छ ।
फिल्ममा स्वराको भूमिकालाई कतिले चाहि ‘महिला शसक्तिकरण’सँग जोडेर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी आफ्नो भूमिकाको विषयमा आएको नानाथरी प्रतिक्रियामा स्वराले पनि मौनव्रत लिएकी छैनन् । उनले मुखभरीको जवाफ फर्काएकी छिन् ।
फिल्मको उक्त दृश्यलाई ट्वीटरमा आरती अग्रवाल नामकी प्रयोगकर्ताले ‘सफ्ट पोर्न’ भनेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘स्वरा भास्करले सफ्ट पोर्न हलिउडबाट कपि गरेका छन् । तर, यसलाई भारतमा प्रतिवन्ध लगाइएको छैन ।’
अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘स्वरा भास्करको हस्तमैथुन सिन बोल्ड छ, तर यो नमुना होइन । यस्तो गर्नु फेमिनिजमलाई ठेस पुर्‍याउनु जत्तिकै हो । स्क्रीनमा कुनै पुरुषले पनि यस्तै गरेको देखाइएमा त्यो रुचीकर हुँदैन ।’
कति प्रयोगकर्ताले के पनि लेखेका छन् भने, ‘स्वरा भास्कर, मैले आफ्नो हजुरआमासँग फिल्म हेरें र त्यसबेला एकदमै लाज लाग्यो, जब हस्तमैथुनवाला सिन आयो । बाहिर निस्किसकेपछि हजुरआमाले भन्नुभयो कि, म हिन्दुस्तान हुँ, यस्तो फिल्म देखेर मलाई लज्जावोध भएको छ ।’
यस्ता अनेक किसिमको प्रतिक्रियापछि स्वरा भास्कर चुप लागेर बस्ने कुरै भएन । उनले तात्तातो जवाफ फर्काएकी छिन्, ‘यस्तो लागिरहेको छ कि, कुनै आइटी सेलले टिकट स्पन्सर गरिदिएको छ, वा फेरी ट्वीट त पक्कैपनि ।’ यसका साथै स्वराले यो पनि ट्वीट गरेकी छिन् कि, ‘म आशा गर्छु कि, आफ्नो वाक्यलाई त बदल । नभएपनि कम्तीमा शब्दको मात्रा जाँच गरी ट्वीट गर ।’
फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’ मा स्वराका साथै करीना कपुर, सोनम कपुर र शिखा तलसानिया पनि छिन् । चार युवतीमा आधारित फिल्म हो, जो जिन्दगीलाई आफ्नो सर्तमा जिउन चाहन्छन् ।